www.camaloow.com - News: Xukuumadda Soomaaliya ayaa dib u eegis ku sameyn doonta Heshiiskii lala galay Shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha Muqdisho ee laga leeyahay dalka Turkiga.
December 10 2018 07:22:31
<?php </a> Xukuumadda Soomaaliya ayaa dib u eegis ku sameyn doonta Heshiiskii lala galay Shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha Muqdisho ee laga leeyahay dalka Turkiga.
Arrintan ayaa ka dambeysay, kaddib markii uu yimid shaki ku aadan dhinaca dhaqaalaha ee ka soo xarooda Garoonka iyo Deked.
â€œHeshiiska aan la galnay oo qoraal ah miiska ayay saaran yihiin, labadaba dib u eegis ayaa ku socota, Al-Beyrak waxay noo sheegeen waxa ay ka qaataan Dekeda iyo waxa ka soo gala aan isku mid aheynâ€ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda oo wareysi siinayay Telefishinka Horn Cabel.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in arrinta ku saabsan Garoonka ay rumeysan yihiin in dhaqaalaha ka soo gala inteeda badan qaadato Shirkadda Favori, taasna iyana heshiis laga gaari doono.
â€œDowlad ahaan waxaa aaminsanahay in Favor naga badsanayaan dhaqaalaha, laakiin waxay noqon doontaa mid labada dhinac lagu qanacsan yahayâ€ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda.
· news on September 26 2016 · 0 Comments · 62873 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,904,008 unique visits